Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy mihaja izay tsy mahay manaja | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy mihaja izay tsy mahay manaja
Tsy tongatonga amin’izao ny fihajana, maro ireo olona mihevitra ny tenany ho be voninahitra nefa tsy ampy fihajana. Ny fahamendrehana amin’ny maha olona no hany antoky ny fihajana, io fahamendrehana io anefa tsy mitoetra raha tsy eo ny fahendrena sy fahaizana aseho eo amin’ny fitandrovana ny hajan’ny rehetra sy ny tsirairay eo amin’ny maha olona azy ary eo amin’ny fitahina sy fanajarina ny tontolo manodidina ny tena.
Nohon’ny baranahana eo anivon’ny fiarahamonina, maro no tsy mitandrina an’izany fanaja-tena izany. Marina aty amin’ny tanan-dehibe izay matetika samy lavitra ny fonenany ny olona dia tsy ampy ny toerana voatokana ahafahana mivalan-drano, noho izany maro ireo tsy menatra mamany eny an-tsisin-dàlana rehetra eny ampahibemaso izao, lehilahy moa no maro amin’ireny tsy mahafehy tena ireny… Resaka hafa ny momban’izay nefa tsy afaka andalovam-potsiny raha tsy anaovana pao-tsatroka manokana ho an’ny andriambavin-danitra izay miavaka amin’ireto mpandoto tanàna.
Eo amin’ny fifanipahan’ny voninahitra sy ny haja moa no tena anton’ny dinika, ka izay no hiverenana ary tsy mila anaovana resaka lava akory. Tsotra ny fanontanina : moa ve tsy arakaraky ny andraikitra iantsorohany no anomezana voninahitra ny manam-pahefana ? Matetika anefa tsy mifanaraka amin’izay ny fifehezany tena, afangarony ny fahefana sy ny fanjakazakana. Indraindray aza dia tonga hatrany amin’ny fihoaram-pefy, fandaingany amin’ny vahoaka sy fitapitaka eo amin’ny fandiganana ny lalàna velona. Ny toe-draharaha iainana ankehitriny dia mitory an’izany, fanovana no nifanekena ny omaly tsy niova no tazana vao miha aza manararaotra, fandrosona no napetraka ho tanjona fihemorana ao anatin’ny fitombon’ny fahasahiranana no manempotra. Tsy mila mijery lavitra fa ny fidangan’ny vidi-piainana dia ampy ivetsovetso an’izany isan’andro. Tsy resaka aingitraingitra fa ny foto-tsakafo faran’izay tsotra no mampikiakiaka nohon’ny fisondrotam-bidiny, na vary na anana na voakazo izay samy vokatry ny tany ka rariny no ho taka-bidin’ny rehetra. Tsy maintsy apetraka manokana ny mikasika ny vary : foto-tsakafon’
ny mponina tsy hain’ny firenena mamokatra ampy ho an’ny filan’ny rehetra. Dia afaka ho lazaina olona mihaja ve ireo niady tamin’ny fakana toerana iadidy ny fambolena nefa mandrak’ity tsy nahita fomba ahatongavana amin’ny fahaleovantena amokatra ny vary ampy ho sakafon’ny mponina ? Ny rehetra nifandimby teo amin’izany toerana izany sy ireo tompom-pahefana nanendry azy mbola miziriziry hibodo sy hiverina eo amin’ny fitondrana.
Une réponse à "Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy mihaja izay tsy mahay manaja"
Flavien Jean-JacquesJaovelo 07/11/2017 à 15:25
Ny trondro rehefa lo dia ny lohany no maimbo vao ny kibony